musha > Travel Europe > 5 Famous Film Places In Europe
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 10/07/2020)
Europe anofuridzira vemifananidzo uye firimu pasi pose, saka hazvishamisi kuti Kunokwezva firimu Vagadziri zvakafanana! Discover 5 Famous Film Places mu Europe uye bhuku mazororo zvenyu uye mabasa kunyudza pachako rwaunofarira mafirimu kuti akakwana zororo pamwe European Best Destinations.
Rail transport is the most environment friendly way to travel. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train The CHEAPEST Dzidzisai Tickets Website In The World.
1. Famous Film Places In Europe: chinhu Hill, London, UK
Rangarirai Hugh anopa maziso zvitema ari firimu chinhu Hill? Discover chinhu Hill, mumwe London vakawanda nzvimbo yakanaka uye musha kune vakawanda quintessentially British VaR-ru. Chero sokuona firimu iri havagoni rubatsiro asi kuti unzwe zviri nani ... The yakanakisisa chikamu pamusoro chinhu Hill ndechokuti zvakawanda zvakanzi filmed nechepakati London! Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kushanyira vazhinji iconic Nzvimbo kuratidzwa bhaisikopo!
In Panovhurwa zvatinoona, Hugh Grants mutambi, William Thacker anofamba kuburikidza Portobello Road Market. Ino akakurumbira pamusika ndewe kushanya kwete chete nokuti chimwe chezvinhu iconic chinhu Hill Filming Locations, asi nekuti nepamusika pachayo rinongova akanaka uye azere quirky Antiques vakangomirira kuzivikanwa.
Next, tinoratidza iwe musoro kuna Wills Bookshop, 142 Portobello Road. The yakanaka shoma bhukusitoo vaiva ne Will ari mafirimu riri 142 Portobello Road. Panguva filming, yaiva antiikki chitoro. nhasi, kero iri musha kuti shangu chitoro. Zvinonzi munhu pedyo bookshop nezita The Travel Bookshop inobva pa 13-15 Blenheim Close aiva kufemera pamusoro mafirimu chitoro.
iconic This 1,000 egore Ages Castle ari kufarira firimu indasitiri, ndokusaka isu kugona kusiya rugure yedu 5 Famous Film Places mu Europe pryslys. It chinonyanya wakakurumbira sezvo nzvimbo Hogwarts muna Harry Potter. Alnwick Castle haasi chete imwe makurusa nematende kugarwa muEngland uye 1,000 zera, asi kuri chinhu firimu nyeredzi yazvo kodzero!
Ichi wakajeka Castle ndechimwe chezvinhu iconic muBritain, ndine akazviratidza dzakakurumbira mafirimu uye zvinoratidzwa paterevhizheni akadai Elizabeth, Robin Washington: Muchinda Mbavha, ari Downton Abbey Christmas chaiwo, uye vakawanda wakakurumbira ayo rokuva Hogwarts School of Nezvouroyi uye Wizardry maviri okutanga Harry Potter mafirimu.
Rakanga riri Castle emaguta kuti Harry akanga ake okutanga Quidditch chidzidzo (yemauto ikozvino wehondo broomstick nokudzidziswa yose mwedzi yezhizha) uye panzvimbo yacho Weasleys ichibhururuka Ford Anglia kwokuputsika yakawira nezuva rokutanga pachikoro.
Kunze forays ayo pamusoro zvikuru nezviduku sefa, zvikuru Castle anewo refu uye akapfuma munhoroondo. It rakadzikwa kumativi 1096 uye riri muna Chirungu County pamusoro Northumberland. Nhasi ndiyo kumusha Duke pamusoro Northumberland nemhuri yake uye ndiye chechipiri pakukura rinogarwa Castle muEngland pashure Windsor Castle.
Kana toreva nematende kuenda, zvakaoma kufungidzira mumwe kupfuura kure uye kunoshamisa nzvimbo pane Dunnottar. Zvichida pamwe zvikuru kwegore risingapindiki nzvimbo dzose wokuScotland nematende, uyu munhu agere pamusoro yayo chikomo kweItari munzira Aberdeen, akarwira kumativi ose nokuda zvakasikwa. Zviri Chokwadi uyewo inozivikanwa kutuswa Princess Meridas mhuri musha Disney Pixars Brave uye zvakapetwa kaviri pamusoro Elsinore muna Franco Zeffirellis Hamlet!
Its nzvimbo panhengo somumwe kunoshamisa zvikuru chero uye imi makakohwa mukana mabiko maziso ako pane mamwe unoshamisa coastlines muScotland. Wind dzakabviswa uswa, chubvu mawere, uye achikurovai mafungu zvose vaungana mune imwe uchidanana chaizvo colour.
Dunnottar anopawo ane tinzwisise memauto kuzvidzivirira uye ane dose nengano uye zvakavanzika zvakanaka. Whigs rakatenderera achaita bvudzi rako panyaya magumo sezvichaita chechi (zvino matongo) akaitungidza raWilliam Wallace.
Kunyange zvazvo Dunnottar ari kuwedzera mukukurumbira, hakusi mumwe busier wokuScotland nematende. Plus, ayo saizi nzira unogona nyore kutiza vazhinji uye nakidzwa rakasiyana nzvimbo ayo anenge ari wako. Zviri zvakare akakwana vanorega kure pamusoro Angus Coastal Route, munhu yevedza zvechokwadi wokuScotland mugwagwa rwendo.
4. Inception, Paris, Furanzi
Paunofunga Paris, Furanzi, iwe rwoga nezvomurume Eiffel Tower. Uye nei wakaramba iwe? It akanaka, uye zviri kwazvo, asi isu tose kuriona chiuru nguva dzose postcards, zvekunamira, Zvarakashambadzira uye nhau mapikicha sezvo taiva vana. Asi pane here chinhu atonhodze akamira chete matombo kukanda kubva Eiffel: ari Inception zambuko.
Pont of bir Hakeim ndiyo bhiriji kuyambuka Seine River muParis. Built anodarika zana apfuura uye nokuvimbika anoshumira rwizi kuyambuka womuratidza veko, asi muna 2010 yakava yechokwadi firimu nyeredzi. Ndiko apo Christopher Nolan akasvika ake vashandi, kusanganisira Leonardo DiCaprio, Ellen Page, uye Joseph Gordon Levitt.
mu 2010 chinhu remashiripiti zvakaitika zambuko ichi. In Panovhurwa zvatinoona, Ellen Pages unhu Ariadne anonzwa sei kuvaka zviroto.
5. Famous Film Places In Europe: The Life uye akanaka, Arezzo, Itari
Firimu iri inongopa misodzi kuti ziso rangu kana ini kunyange pafunge. Ndakatarisa ichi yakakurumbira firimu kuchikoro kwemakore akawanda apfuura, uye haana kusiya ndangariro dzangu. Ndokusaka ndaita pachangu aenda kuona firimu iri yakakurumbira panzvimbo pachangu! Roberto Benigni 1997 Oscar kuhwina La Vita E Bella (Upenyu Beautiful) riri rounyanzvi! Set muna WWII, nayo inotiudza murume wechiJudha Italian ainzi Guido Orefice. PaAnosangana uye anowira kungoda yakaisvonaka Dora uye vane mwanakomana, Joshua, pamwe chete.
Nyaya iri pamusoro mhuri Guidos uye sei upenyu hwavo kuti hwaJobho hwachinja vari kuendeswa kumusasa wevasungwa apo. nepo ikoko, kuti pokugara mwanakomana wake kubva kutyisa kwake nharaunda, Guido weaving wemaoresa nyaya. nguva yavo mumusasa kungonamata mutambo. Filmed mhiri wandei anogadza centerpiece pakati pakutanga firimu, zvisinei, ndiro akanaka Tuscan guta Arezzo.
Florence kuna Arezzo Zvitima
Perugia kuna Arezzo Zvitima
Bologna kune Arezzo matikiti
Siena kuna Arezzo Zvitima
Muri kana kugadzirira kukopa mumwe mafirimu izvi kuti kurinda kana somugumisiro kuronga rwendo yako kare, havasi imi? Wadii kuita zvose! musoro pamusoro kuti Save A Train uye bhuku tikiti mumaminitsi mumwe 5 Famous Film Places mu Europe!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Famous Film Places In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel filmplaces mafirimu filmspots trainjourney Tranride